အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပြောနေကြတာနဲ့ ဘာမှမဆိုင်တဲ့ ရိုးမရိပ်သာ အကြောင်း ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံ - Zet Star
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ပြောနေကြတာနဲ့ ဘာမှမဆိုင်တဲ့ ရိုးမရိပ်သာ အကြောင်း ကိုယ်တွေ့ အတွေ့အကြုံ
Hello everyone ညီမမနေ့က ကမာရွတ်TTC Q center ကနေ အခု တောင်ဒဂုံရိုးမရိပ်သာရောက်နေပါပြီ….မနေ့ကညနေ ရွှေ့တဲ့ကားပေါ်ရောက်မှ ရိုးမရိပ်သာပြောင်းရမယ်ဆိုတာ သိတာပါ….
ရိုးမရိပ်သာကိုပြောင်းတော့ YBS ကားတွေနဲ့တစီးပေါ်မှာ ၂၆ယောက်စီးပြီးတော့ ပြောင်းရပါတယ် ကားတော့ တော်တော်စီးလိုက်ရတယ် ၂ နာရီလောက်ကြာပါတယ်….ညီမတို့ပြောင်းတော့ ညီမတို့ကားရှေ့မှာ ရဲကားတစီး နောက်မှာဆေးရုံကားတွေနဲ့ ပြောင်းရတာပါ (VIP တွေပါပေါ့)…..
စစချင်းတော့ ရိုးမရိပ်သာဆိုတော့ စိတ်ဓာတ်တော့ ကျသွားပါတယ် ဖေ့ဘုတ်ပေါ်မှာ ရိုးမရိပ်သာမှာ ဘာဖြစ်ပါပြီ ညာဖြစ်ပါပြီဆိုပြီး တွေ့နေရလို့ပါ… စရောက်တော့ဆရာဝန်တွေ Volunteer တွေ PPE ဝတ်ထားတဲ့သူတွေ အကုန်လုံးက အထုတ်တွေဆွဲပေး အခန်းချ​ပေးပါတယ်…
ရောက်ရောက်ချင်း ဆရာဝန်ဆီ လူနာနာမည်နဲ့ အသက် ရောဂါအခြေအနေကို မက်ဆေ့ လှမ်းပို့ပေးရပါတယ်…အခန်းတခန်းမှာ၄ယောက်နေရတာပါ…တယောက်အိပ် ကုတင်တလုံးစီနဲ့ ၄လုံးရှိပါတယ်…. အခန်းတခန်းစီထဲမှာ ရေချိုးခန်းအိမ်သာတွဲရက်နဲ့ အဲကွန်းတလုံး စီပါပါတယ် (အဲကွန်းပါတာနဲ့တင် တော်တော်ပျော်နေပြီ) ပြီးတော့ အထုတ်အကြီးကြီး တထုတ်ထဲမှာ ပစ္စည်းအသစ်တွေပါတဲ့ ခေါင်းအုံး စောင် ခြင်ထောင် မွေ့ယာ သွားတိုက်ဆေး သွားတိုက်တံ ရေခွက် ရေပုံး ပြီးတော့တခြားအများကြီးပါသေးတယ်
အထုတ်က တော်တော်ကြီးတယ် တခန်း တထုတ်ရတာပါ..အဝတ်လှမ်းစင်နဲ့ ချိတ်တွေလဲရှိပါတယ်…ထမင်းဟင်းလဲ အဆင်ပြေပါတယ် မနေ့က feel ကလှူပါတယ်…ဒီနေ့ ခိုင်ခိုင်ကျော်ကလှူပါတယ်….(feel တို့ ခိုင်ခိုင်ကျော်တို့ဆီက အစိုးရကပိုက်ဆံပေးပြီး ဝယ်တယ်ပြောတယ် လှူတာလား ဝယ်တာလား ညီမ သေချာမသိလို့ပါရှင်) လာပို့ရင်လဲ တတိုက်လုံး လူအပြည့်စာအပြင် ထမင်းဘူးတွေ ပိုထားခဲ့တာပါ တဘူးမဝရင် နောက်တဘူး ထပ်စားလို့ရပါတယ်..
ကြက်စွပ်ပြုတ်တို့ မုန့်ပုံးတို့ ခေါက်ဆွဲခြောက်တွေလဲ ဝေစုအလိုက်ရပါတယ်(မုန့်များများ စားချင်ရင်တော့ အိမ်ကယူမှ အဆင်ပြေပါမယ်) ဝိုင်ဖိုင် မရှိပါဘူး အင်တာနက်လိုင်းကတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဖွင့်ပြီး သုံးရပါတယ်… Ooredoo လိုင်းတအားမိပါတယ် တခြားကတ်တွေ လိုင်းသိပ်မမိပါဘူးနော်..
ပြီးတော့ အထပ်တထပ်မှာ ဆေးပုံးတပုံး ထားပေးထားပါတယ်… အဲ့ပုံးထဲမှာ သွေးတွင်းအောက်ဆီဂျင်တိုင်းစက်တွေ ဆေးချိုတိုင်းစက်တွေ တခြားဟာတွေလဲ အစုံရှိပါတယ်… မနက် နေ့လည် ည တနေ့ ၃ကြိမ် သွေးတွင်းအောက်ဆီဂျင်နဲ့ နှလုံးခုံစက် တိုင်းရပါတယ် ဆရာဝန်က ဘယ်သူက ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာ ဖုန်းဆက် လှမ်းမေးပါတယ်…
ဆရာဝန်တွေရော တခြား Volunteer တွေရော မကြာခန round လှည့်ပြီး ဘာလိုလဲ လာလာမေးပါတယ်…ဖျားနာရှိရင် ဖုန်းဆက်ရပါတယ် ဆေးလာပို့ပေးပါတယ်….ဆရာဝန်တွေရော Volunteer တွေရော တော်တော်အလုပ်လုပ်ကြပါတယ် Team အလိုက်တွေ ခွဲပြီး အလုပ်လုပ်ကြတာပါ Engineer Team ကလဲ မီးဘာညာအတွက် လိုက်စစ်ပေးပါတယ်..
လူနာတွေ ပြန်သွားရင် ကျန်ခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းမွေ့ယာ ခေါင်းအုံးဘာညာ အကုန် မီးရှို့ပါတယ်တဲ့…ခြုံပြောရရင် အဆင်ပြေလားဆိုရင်တော့ ပြေပါတယ်…လိုအပ်ချက်ရှိတာတွေ လည်းရှိမှာပါ…လူအများနဲ့ နေတာဆိုတော့ တော်ရုံအဆင်မပြေတာဆို နားလည်ဖို့တော့ လိုပါမယ်…. ညီမအတွက်က ဘာလိုလဲဆိုရင် မုန့်ပဲများများလိုပါတယ် အိမ်ကနေ မုန့်လာပို့မဲ့ရက်က ပြောင်းရတဲ့ရက် ဖြစ်သွားတော့ မုန့်အများကြီးတော့ ပါမလာတော့ဘူး (ပုံလေးတွေတင်ပေးထားတယ်နော် စာလေးတွေပါရေးပေးထားတယ်) အားလုံး fighting ပါ။ Take Care နော်
ZarZar Myo Lwin
← “ငါတို့ ညီမလေး နိုင်တယ်…” (ကိုဗစ်ကို အနိုင်ယူခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်သမီးလေး အကြောင်း)
အိမ်ထဲမှာ ကျိတ်ကုနေကြလို့ တပတ်အတွင်း တအိမ်ထဲ (၃) ယောက် ဆုံးသွားရတဲ့ မြေနီကုန်းက အဖြစ် →